Haitian Culture (wemari code: 870359), anoshamisa ambotaurwa dzesangano runobva Zigong guta, rinozivikanwa mutaundi rokumusha Lantern mitambo. Parizvino, Culture Haitian akaita pamwe akakurumbira dzomunyika mabhizimisi uye vakauya izvi zvinoshamisa Lantern mitambo dzinopfuura 40 kunyika uye kunzvimbo dzakadai USA, Canada, UK, France, Italy, New Zealand, Japan uye Singapore, etc. Hatina akapa ichi chikuru kuvaraidzwa nazvo mhuri-noushamwari mazana emamiriyoni evanhu pasi rose.
Mumakore 20 'kukura, Haitian Culture chakabereka mukurumbira zvikuru zvinodiwa yepamusoro mu zviitiko zvedu uye zvigadzirwa. Unhu uhwu anowana mukurumbira kubva shamwari dzedu uye vatengi. Haitian anogara vanodada kushanda nemakambani akadai Disney, Hello Kitty, The World Carnival, Coca cola, China Central Terevhizheni, uye mamwe makambani dzakawanda kusimudzira kwavo simba simba kuburikidza yedu Lantern mitambo.
Tava sinserely kutsvaga zvakawanda vamwe kubata izvi guru Lantern festvials uye kupa usiku zvikuru nomufaro muguta renyu.